Onasia (Odensetron) – Online Myanmar Pharmacy
Onasia (Odensetron) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
အိုနားစီးယားဆေးသည် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောင်နာ ကြောင့်ပျို့အန်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတွင်ပျို ့အန်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ပီးနောက်ပျို့အန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၊ကင်ဆာဆေးကြောင့်ပျို့အန်ခြင်း၊ ဓါတ်ကင်ခြင်းကြောင့်ပျို ့အန်ခြင်းများကို ကာကွယ်ကုသရန်အသုံးပြုပါသည်။
1. Nausea-vomiting associated with gastroenteritis
2. Nausea-vomiting associated with pregnancy
3. Prevention of postoperative nausea and vomiting
4. Prevention of nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy
5. Prevention of nausea and vomiting associated with initial and repeat courses of moderately emetogenic cancer chemotherapy
6. Prevention of nausea and vomiting associated with radiotherapy in patients receiving either total body irradiation, single high-dose fraction to the abdomen or daily fractions to the abdomen